Chii chinonzi Primobolan (methenolone enanthate)? Zvose Methenolone Enanthate (303-42-4) uye Methenolone Acetate (434-05-9) inogadzira zvimwe zvinoshandiswa, uye basa ravo rinenge rakafanana chete kuti Methenolone Enanthate ine ester yakaiswa pairi kuti ibatsire kuderedza kusunungurwa kwe steroid ku mutumbi. Uyewo, Methenolone Enanthate inotungamirirwa kuburikidza nejojo ​​apo Methenolone Acetate inogadzirwa ora ...
Iwe unofarira here kuva nemuurayi uyo uyo munhu wese anovhara? Kunyange zvazvo uchidya zvakanaka uye uchienda kumitambo inogona kunge isina kukwana, kutora steroid anabolic zvechokwadi inobereka zvibereko kupfuura iwe wakambofunga. Nhasi ndiri kuenda kuzokuudza nezveNandrolone Decanoate, Deca Durabolin, Nandrolone Decanoate, Nandrolone Decanoate inoshandisa, Nandrolone Decanoate nekuongororwa uye zvose zvakakosha pamusoro pechirwere ichi chikuru. ...
Equipoise imwe steroid inoshamisa inotengesa pasi pezita rinonzi Boldenone Undecylenate (13103-34-9). Boldenone Undecylenate inonyanya kuzivikanwa pakati pevashandi vekuvaka muviri nevatambi nekuda kwekukwanisa kwayo kupa hutano hwemasimba masimba uye simba. Steroid inowanikawo pamusika pasi pemazita akasiyana-siyana emakiti akafanana naMitgan, Bolden, Equigan, Ganabol, uye Ultragain pakati pevamwe. Kufamba mu th ...